Fikarohana momba ny firaisana Raharaha famerenan-tena momba ny mpisolo an'i Frankenstein Boris Karloff | Ty Burrell, kintana iray ao amin'ny Televiziona Serasera Fianakaviana maoderina: Talenta fiainana taloha - Reincarnation fikarohana
Ty Burrell ho Reincarnation any Frankenstein, izany hoe ny Actor Boris Karloff
Mpankafy an'i ReincarnartionResearch.com no nanoratra ahy ary nanolotra izany Ty Burrell, mpilalao Amerikana ary kintan'ny seho amin'ny tantara mahatsikaiky, Modern Family, dia reincarnation ny mpilalao tamin'ny taonjato fahasivy Boris Karloff. Rehefa nandinika ny sarin'ireo mpisehatra roa ireo aho dia nahatsikaritra fitoviana miavaka amin'ny endri-tarehy. Tsindrio sary raha hanitatra azy ireo mba hankasitrahana ny fitoviana amin'ny endrika maritrano na firafitry ny taolana.
Boris Karloff dia teraka tany Londres, Angletera tamin'ny Novambra 23, 1887. Ny anarany teraka dia William Henry Pratt. Pratt taty aoriana dia naka ny anaran'ny sehatra Boris Karloff.
Karloff dia nalaza tamin'ny asany tamin'ny sarimihetsika momba ny toetran'ny angano Frankenstein. Ny handrin'i Karloff lehibe dia nametraka ny modely ho an'ny sary ara-batana an'i Frankenstein ho an'ny sarimihetsika amin'ny ho avy.
Karloff dia nandray anjara tamin'ny feo tamin'ny sarimihetsika mihetsika ary lasa Grinch tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra ho an'ny ankizy, Dr. Seuss: Ahoana ny fomba nahazoan'ny Grinch ny Noely.
Boris Karloff dia nomena loka roa tao amin'ny Hollywood Walk of Fame noho ny zava-bitany tamin'ny sinema. Nodimandry tamin'ny volana febroary 2, 1969 i Boris Karloff.
Fahatongavana ho nofo ao amin'ny raharaha Reincarnation an'ny Boris Karloff | Ty Burrell
Ty Burrell dia teraka tamin'ny Aogositra 22, 1967, tokony ho herintaona sy tapany talohan'ny nahafatesan'i Boris Karloff. Raha izany dia tranga amin'ny fahatongavana fisarahana izy io, izay misy fanahy iray miraiki-tena amin'ny vatana nofo roa amin'ny fotoana iray. Ian Stevenson MD, avy ao amin'ny University of Virginia Nantsoina hoe “tranga misy daty mihetsiketsika” ireo tranga ireo, satria tafahoatra ny fotoana.
Na dia malaza amin'ny maha-mpanao hatsikana an'i Ty Burrell aza izy, dia nahavita sarisary sarisary ihany koa tao amin'ny Broadway ary izy koa dia nanao fampisehoana feo tao amin'ny horonantsary marobe, toa an'i Karloff nanao ny feon'ny Grinch.
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, Ahtun Re, fanahy iray nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, nanamafy fa i Ty Burrell no réincarnation an'i Boris Karloff.
Ny fitoviana ara-batana amin'ny raharaha momba ny fanambadianas: Misy fitoviana tsy misy fanaingoana eo amin'i Boris Karloff sy i Ty Burrell.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: Ny talenta an-tsehatra nataon'i Boris Karloff dia mamiratra ao amin'ny asan'i Ty Burrell.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Teraka tany Angletera i Boris Karloff, raha i Ty Burrell dia teraka tany Etazonia. Ny fahatakarana fa ny fanahy dia mety hivoatra amin'ny fivavahana isan-karazany, ny firazanana ara-poko sy ny zom-pirenena amin'ny vanim-piainana ka hatramin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa satria ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Ty Burrell dia teraka tamin'ny Aogositra 22, 1967. Nodimandry tamin'ny volana febroary 2, 1969 i Boris Karloff. Toy izany, ny fanahin'ny Karloff | Burrell namorona vatana roa tamin'ny fotoana iray nandritra ny herintaona sy tapany.
Ny fikarohana reincarnation dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka miaina mihoatra noho ny olombelona iray amin'ny fotoana iray. Ian Stevenson, MD ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, izay nandalina ny ankizy manana fahatsiarovana fiainana lasa tampoka izay voamarina tsara, nisy nanoratra ireo tranga maro niovaova, na dia nantsoiny aza ireo "tranga misy daty mihetsiketsika" ireo, satria tafahoatra ny fotoana.